မြန်မာနက် ® Myanmar Net Law Library | ဥပဒေအထက်မှာ မည်သူမှ မရှိစေရ
Myanmar Law Center | မြန်မာဥပဒေများ
အယ်ဒီတာ၏ အမှာစာ – “ဥပဒေတွေ ရေးထားတာ ဘာတွေမှန်း မသိဘူး။ နားမလည်ဘူး” လို့ ဆင်ခြေပေးပြီး၊ ရှောင်ကွင်းနေရင်တော့ သေချာပါတယ်။ တစ်နေ့ကျရင် ဒုက္ခရောက်ဘို့ များပါတယ်။ အဲဒီလောက် မခက်ပါဘူး။ ကြိုးစား ဖတ်ကြည့်ပါ။ ၅၀% မကတော့ နားလည်ပါလိမ့်မယ်။ ဥပဒေ ဆိုတာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံစီမှာ ရှိတဲ့ နေထိုင်သူတိုင်း (နိုင်ငံသား+ နိုင်ငံခြားသား တိုင်း) လိုက်နာရမယ့် စည်းကမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ့် စည်းကမ်းမှ ကိုယ်မသိရင် အဲဒီတိုင်းပြည် ဘယ်လိုနေမလဲ? ဥပဒေဆိုတာ အများအားဖြင့် ချိုးဖောက်ရင် ထောင်ဒဏ်၊ ငွေဒဏ်တွေ ပါလာတဲ့ တင်းကြပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ မသိလိုက်လို့ ခံလိုက်ရတာမျိုး မဖြစ်အောင်၊ မသေချာလို့ သိချင်တဲ့အခါ ရှာလို့ရအောင်၊ ရည်ညွှန်းလို့ရအောင် ပြည်သူအများအတွက် ခေတ်အလိုက် ဥပဒေများကို မြန်မာနက်မှ စုစည်း တင်ပြထားပါတယ်။
၂၀၂၁ မှ ယနေ့ထိ (နစက)
၂၀၁၆ မှ ၂၀၂၁ (ဒီချုပ်)
၂၀၁၁ မှ ၂၀၁၆ (ပြည်ခိုင်ဖြိုး)
၁၉၈၈ မှ ၂၀၁၁ (နဝတ+နအဖ)
၁၉၆၂ မှ ၁၉၈၈ (မဆလ)
၁၉၄၈ မှ ၁၉၆၂ (ဖဆပလ)
၁၈၀၀ မှ ၁၉၄၈ (ဂျပန်+ ဗြိတိသျှ)
2020-05-26 – ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ် စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ
ယာဉ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့် မော်တော်ယာဉ် စီမံခန့်ခွဲမှုဥပဒေ (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ဥပဒေအမှတ် ၆။) ၁၃၈၂ ခုနှစ်၊ နယုန်လဆန်း ၅ ရက် (၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ မေလ ၂၆ ရက်) ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်သည် ဤဥပဒေကို ပြဋ္ဌာန်းလိုက်သည်။ အခန်း(၁) အမည်နှင့် အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြချက်...
2M2N : Myanmar Net News
FDA Panel သည် COVID Boosters တွင် Omicron အစိတ်အပိုင်းကို ပေါင်းထည့်ခြင်းကို ထောက်ခံသည်။ 2022-06-29
ကလေးများအတွက် COVID ကာကွယ်ဆေးများအကြောင်း အဓိကမေးခွန်းများအတွက် ကျွမ်းကျင်သောအဖြေများ 2022-06-29
SEC ဥက္ကဋ္ဌက Bitcoin သည် တစ်ခုတည်းသော ကုန်စည်စီးဆင်းမှု | Forbes 2022-06-29
Download FREE Myanmar Net app
Google Play Store ကနေ မြန်မာနက် အက်ပ်ကို အခမဲ့ ရယူဘို့ အောက်က ပုံလေးကို နှိပ်လိုက်ပါ။
We also haveaCSR policy that we do NOT do accept businesses with alcoholic, cigarette, and MLM businesses.
⦿ မြန်မာနက် ⦿ အင်တာနက်လမ်းညွှန် ⦿ ဂိမ်း ⦿ သတင်း ⦿ အကျိုးဆောင် ⦿ ဈေး ⦿ အလုပ်ရှာ ⦿ ကား ရောင်းဝယ်ငှား ⦿ ရုပ်ရှင်ကြည့် ⦿ သီချင်းနားထောင် ⦿ ပိဋကတ်တရားနာ ⦿ စားစရာမှာ ⦿ အိမ်ခြံမြေ ⦿ ဥပဒေ ⦿ အဘိဓာန် ⦿
1886-1948 (ဂျပန်+ ဗြိတိသျှ)